भोकमरीले भारतमा गरिबले मृत कुकुरको लाश खाँदै गरेको भिडियो राख्दै लेखे यो मोदीले देखुन् [भिडियोसहित] « Janaboli
भोकमरीले भारतमा गरिबले मृत कुकुरको लाश खाँदै गरेको भिडियो राख्दै लेखे यो मोदीले देखुन् [भिडियोसहित]
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण भारत अहिले संकटमा परेको छ । अहिलेको जानकारी अनुसार भारतमा संक्रमितहरुको संख्या १ लाख २० हजार नजिक पुगेको छ । भारतमा गएको झण्डै दुई महिनादेखि लागु भएको लकडाउनका कारण निकै गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
यस्तै एक भिडियो बाहिर आएको छ । भारतका एक व्यक्तिले मृत कुकुरको काँचो मासु खाइरहेको भिडियो भाइरल भएको छ । राजस्थान राजमार्गमा गाडी हाँक्दै आएका प्रद्युम्न सिंह नरुकाले देखेको एक दृश्यले सबैको होस उडाएको छ । उनले एक भारतीय नागरिक सडकमा मृत कुकुरको लाश खाइरहेको देखे ।
यस घटनाले भारतमा कोरोनोभाइरससँगै लकडाउनबीच भोक र गरिबीले जनता कतिसम्म संकटमा छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनले राखेको भिडियोमा उनले भने, ‘यो मानिस सडकमा कुकुरको मासु खाँदैछ ।’ कार रोकेर उनले ति मान्छेलाई सोधे, ‘तिमीसँग खानेकुरा छैन ? तिमी के खाँदै छौ ? यो नखाउँ तिमी मर्छौ ।’ त्यसपछि उनले त्यस मान्छेलाई सडकको छेउमा उभिन निर्देशन दिए ।
त्यसपछि आफ्नो मुख रूमालले छोपेर उनले ति व्यक्तिलाई खाजा र पानीको एक बोतल दिए । कुनै हिचकिचाहट बिना, ति भोका मान्छे खाना खान शुरू गर्दछन् । जब नरुकाले उनलाई पृष्ठभूमिको बारेमा प्रश्न गरे । उनले ति मान्छेलाई पैसा दिन्छु भने तब सबै कुराको खुलासा भयो । त्यसपछि नरुका भन्छन्, ‘मैले यो मान्छे जनावर खाइरहेको देखे, म दिल्ली जाँदै गर्दा सडकमा यस्तो देख्नुपर्यो । यदि तपाईं बाटोमा कसैलाई यस्तो हातलमा देख्नुहुन्छ भने, कृपया तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् र यो भिडियो सरकारसँग साझा गर्नुहोस् जति सक्दो गर्नुहोस्।’
आफ्नो फेसबुक पेजमा क्लिप साझेदारी गर्दै, नरुकाले लेखे, ‘राजस्थानको शाहपुरा स्थित दिल्ली–जयपुर राष्ट्रिय राजमार्गमा देखिएको दृश्य हेर्दा मानवतालाई लाज लाग्छ, जब एक जना मजदुर भोकका कारण मृत कुकुर खान बाध्य छन् । कसैले पनि उस्लाई सहयोग गर्न सकेन् । मैले उसलाई खुवाएँ र उसलाई पैसा पनि दिएँ । यदि तपाईले कसैलाई भोकाएको देख्नु भयो भने कृपया सहयोग गर्नुहोस् ।’ अहिले यो भिडियो सबै तिर भाइरल भइरहेको छ ।
ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले वर्तमान समयमा सत्तामा रहेको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आलोचना गरिरहेका छन् । ए्कजनाले लेखे, ‘यो हृदय विदारक हो । कोही यसको लायक छैन । ऊ मृत कुकुरको लाश खाँदैछ ।’ उनले मोदीलाई ट्याग गर्दै भारतले गरिबको यो कष्टलाई बिर्सिएन र गरिबको अपमान गर्यो भनेका छन् । अर्का एकजनाले भारतको वर्तमान रेल तथा वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयललाई दोषि मानेका छन् ।
उनले लेखे, ‘जब पियुष गोयलले कोही भोकाएको छैन भने उनले यो देख्नुपर्दछ । देख्न सक्दैन, यहाँ दुःखको कल्पना गर्न सक्दैन ।’ हाल हजारौं आप्रवासी कामदारहरू भारत भरिका शहरहरूबाट आफ्नो घर गइरहेका छन् । त्यहाँ मजदुरहरू ज्यान जाने, भोकमरी सहेर बस्ने मात्रै नभई आधारभूत आवश्यकताहरू बिना हिड्ने असंख्य रहेका छन् । लकडाउनका बीचमा मोदी सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम जनताले भोग्दै आएका छन् । News
नदीमा तैरिएको अवस्थामा ७३ लाख भेटिएपछि…
काठमाडौ । अष्ट्रियाका एक युवाले ७३ लाख भेट्टाएका छन् । युवकले नदीमा धेरै पैसा देखेर
११४ वर्षका वृद्धले कोरोना महामारीलाई चामत्कारिक रूपमा यसरी हराए
काठमाडौं । कम्तीमा एक सय वर्षीय ठानिएका एक इथियोपियाली वयोवृद्ध कोभिड-१९ बाट चामत्कारिक रूपमा निको
काठमाडौ । विश्वमा यस्ता अनौठो कुराहरु पनि हुन्छन् जुन हामी सहजै विश्वास गर्न सक्दैनौँ ।
कर्मको कुरा छोडौ, भाग्य चम्किदा एकै रातमा करोडपति बने यी युवा
काठमाडौं । धेरै मान्छेहरु कर्म गर्ने तर फलको आश नगर्ने पक्षमा रहने गरेका छन् ।